TeamLiquid – Gaming Noodle
[Zawgyi] တရုတ် Streaming ပလက်ဖောင်း HUYA နဲ့ လက်တွဲခဲ့တဲ့ Team Liquid ကမ္ဘာကျော် Esports Organization တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Team Liquid ဟာ သူတို့ရဲ့ ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကမှာ အခြေစိုက်တဲ့ အသင်းမှ ကစားသမားတွေရဲ့ Live-stream တွေကို တရုတ်နိုင်ငံဆီ သယ်ဆောင်လာပါတော့မယ်။ Team Liquid ကစားသမားတွေရဲ့ Twitch မှာ တိုက်ရိုက်ဆော့ကစားနေပုံတွေကို တရုတ်ပြည်က HUYA Platform မှာပါ အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Team Liquid ရဲ့ website မှာတော့ ဒီပေါင်းစည်းမှုကို အနောက်တိုင်း အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ တရုတ် Platform တစ်ခုကြား အကြီးမားဆုံး ပူးပေါင်းမှုလို့ ဖော်ကျူးထားပါတယ်။ ထိုပေါင်းစပ်မှုဟာ …
တရုတ် Streaming ပလက်ဖောင်း HUYA နဲ့ လက်တွဲခဲ့တဲ့ Team Liquid Read More »
Team Liquid ရဲ ကစားသမားသစ် ဘယ်သူဆိုတာပေါက်ကြားခဲ့တာလား? joinDota website ကနေ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းသတင်းတစ်ခု တက်လာပါတယ်။ ဒါကတော့ Team Liquid အနေနဲ့ မနေ့ကပဲ Matumbaman က Active Roster ကနေ ထွက်ခွာသွားတဲ့ သတင်းကို ကြေညာအပြီး ၂၄ နာရီ မပြည်ခင်မှာပဲ သူတို့ရဲ့ player အသစ်လို့ ယူဆရနိုင်မယ့် သတင်းတစ်ခု ပေါက်ကြားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒာကတော့ Chaos Esports က KheZu ရဲ့ Twitch မှာ Stream နေရင်း သူ့ရဲ့ Friend List စာရင်းထဲမှာ Team Training လုပ်ဖို့ Lobby တစ်ခုထဲ တူတူရောက်နေတဲ့ W33ha …
Team Liquid ရဲ ကစားသမားသစ် ဘယ်သူဆိုတာပေါက်ကြားခဲ့တာလား? Read More »
Team Liquid ပွဲထွက်စာရင်းက နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Matumbaman
[zawgyi] Team Liquid ပွဲထွက်စာရင်းက နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Matumbaman မိနစ်ပိုင်းအလိုကပဲ Team Liquid က တရားဝင် ကြေညာချက်တစ်ခု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ သက်တော်ရှည် Carry တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ MATUMBAMAN ဟာ ၂ ဦးသဘောတူ အသင်းရဲ့ Active Roster ကနေ နုတ်ထွက်သွားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Kuroky ရယ် MinD_ContRoL ရယ်နဲ့တူတူ 2015 ကတည်းက အသင်းမှာရှိနေတဲ့ MATUMBAMAN ဟာ အသင်းရဲ့ သက်တမ်းအရှည်ဆုံးကစားသမားဖြစ်ပြီး GH စတင်ရောက်လာတဲ့ 2017 ဇန်နဝါရီလကတည်းကဆိုရင် Team Liquid ဟာလူစာရင်း အပြောင်းအလဲမလုပ်တာ ၂ နှစ်ခွဲခန့် ရှိနေပါပြီ။ ဒါဟာ Team Liquid အတွက် ကောင်းတဲ့ …
Team Liquid ပွဲထွက်စာရင်းက နှုတ်ထွက်သွားတဲ့ Matumbaman Read More »